၂၀ ရာစုမှာ လူတွေနားအထောင်ဆုံး သီချင်းဖြစ်လာတဲ့ Queen အဖွဲ့ရဲ့ Bohemian Rhapsody သီချင်း
On December 16, 2018 December 14, 2018 By Aminnyar
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ (တနင်္လာနေ့) တုန်းက ကမ္ဘာကျော် တေးထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Universal Music Group (UMG) ဟာ တရားဝင် ကြေညာချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကမ္ဘာကျော် ရော့ခ် Band တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Queen အဖွဲ့ရဲ့ Bohemian Rhapsody သီချင်းဟာ ၂၀ ရာစု တစ်လျှောက်လုံး အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူတွေနားအထောင်ဆုံး သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေးပါပဲ။ UMG […]
Music NewsCelebrityrock bandVarietyYouTubeLeaveacomment
Version2နဲ့ အသစ်ထွက်လာတဲ့ Maroon5ရဲ့ Girls Like You
On October 19, 2018 By Aminnyar
Maroon5အဖွဲ့နဲ့ Cardi B တို့ ပူးပေါင်းသီဆိုထားကြတဲ့ Girls Like You သီချင်းရဲ့ Music Video ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၃၀ ရက်နေ့တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ အဲဒီ Music Video ထဲမှာ Maroon5အဖွဲ့က ပင်တိုင်အဆိုတော် Adam Levine နဲ့ Rapper မမ Cardi. B တို့နဲ့ […]
Music Newsboy bandHip-Hop / RapMusic VideoPoprock bandVarietyYouTubeLeaveacomment
Rocker ကြီး Ferddie Mercury အတွက် လေဆိပ်လုပ်သားတွေရဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင်
On September 10, 2018 By Aminnyar
Rocker ကြီး Ferddie Mercury ဟာ ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေစပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့တဲ့ Queen အဖွဲ့က ပင်တိုင်အဆိုတော်ကြီး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ရော့ခ်ချစ်သူတွေ အားလုံးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ တကယ်တော့ Queen အဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ရော့ခ်ဂီတသမိုင်းကြောင်းထဲမှာ လုံးဝလုံးဝ မေ့ချန်ထားလို့ မရတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့အဖွဲ့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အခွေရောင်းအားအကောင်းဆုံး ရော့ခ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်း […]
FeaturesCelebrityRockrock bandYouTubeLeaveacomment
Berlin ရှိုးပွဲမှာ သီဆိုဖျော်ဖြေရင်း အသံပျက်သွားခဲ့ရတဲ့ U2
On September 4, 2018 By Aminnyar
ကမ္ဘာကျော် ရော့ခ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ U2 အဖွဲ့က ပင်တိုင်အဆိုတော် Bono ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့တုန်းက မျှော်လင့်မထားတဲ့ အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုနဲ့ ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ Berlin မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ရှိုးပွဲတစ်ပွဲမှာ စင်ပေါ်ကနေ ပရိသတ်တွေကို သီဆိုဖျော်ဖြေနေရင်း Red Flag Day ဆိုတဲ့ သီချင်းအလှည့်ရောက်တော့ ဆိုနေရင်း အသံက လုံးဝထွက်မလာတော့ဘဲ ပျောက်ထွက်သွားခဲ့ရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
Music NewsRockrock bandtour newsLeaveacomment
On August 17, 2018 By Aminnyar
တချို့တချို့သော ဂီတအမျိုးအစားတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ တိမ်ကောသွားခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Rock ဂီတကတော့ မျိုးဆက်တွေ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းရင်း အခုချိန်ထိတိုင်အောင် အသစ်တွေနဲ့ အဟောင်းတွေဟာ ရောနှောပြီး ရှင်သန်နေဆဲ၊ စီးဆင်းနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ… Rock ဂီတအကြောင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် Aerosmith အဖွဲ့ဆိုတာကို လုံးဝချန်ထားလို့ မရဘူးဆိုတာ သီချင်းချစ်သူတွေအားလုံး သိပြီးသားလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်…. အမေရိကန်နိုင်ငံက Boston ဆိုတဲ့ မြို့လေးမှာ ၁၉၇၁ ခုနှစ်လောက်မှာ […]
Music NewsCelebrityrock bandtour newsLeaveacomment
Japan Rock Band တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ONE OK ROCK ရဲ့ Music Video အသစ်ထွက်ရှိလာ
On June 22, 2018 June 22, 2018 By Kashia
ONE OK ROCK band ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Change သီချင်းရဲ့ Music Video ကတော့ ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ June 20 ရက်နေ့က ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှစ်ရက်အတွင်း ကြည့်ရှုသူ 1M Views ရှိသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Change ကတော့ ဒီနှစ် February လမှာ ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ 2018 ရဲ့ New Single ဖြစ်ပါတယ်။ ONE OK […]
Music NewsRockrock bandLeaveacomment
City Boy ဆိုတဲ့ debut single ထုတ်လိုက်တဲ့ Stranger Things မင်းသားလေး “Finn”
On March 12, 2018 By fairy
Stranger Things ထဲက သနားကြင်နာတတ်တဲ့ Mike တဖြစ်လဲ Finn Wolfhard ကတော့ Calpurnia လို့အမည်ပေးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ band နဲ့အတူတီးခတ်သီဆိုထားတဲ့ City Boy ဆိုတဲ့ သီချင်းဗွီဒီယိုကို သူ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက် ချပြလိုက်ပါပြီ။ Hope you’ve all been enjoying City Boy!!! Click the link in our bio and while […]
Music Newsdebut singlerock bandLeaveacomment